LAMA FILAAN: Bruno Fernandes Oo Sky Sports Uga Dacwooday In Ayna Dabaal Degiisa Muujin Iyo Sababta Dhabta Ah Ee Nooca Dabaal Degiisa Ka Danbaysa Oo Uu Sharaxay. - Gool24.Net
LAMA FILAAN: Bruno Fernandes Oo Sky Sports Uga Dacwooday In Ayna Dabaal Degiisa Muujin Iyo Sababta Dhabta Ah Ee Nooca Dabaal Degiisa Ka Danbaysa Oo Uu Sharaxay.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa arin qariib ah kaga dacwooday Sky Sports oo inta badan haysta xuquuqda baahinta kulamada Premier League.
Bruno Fernandes ayaa sheegay in Sky Sports ayna soo muujin dabaal degiisa isla markaana uu doonayo in uu la kulmo Sky Sports si uu arinta ugala hadlo balse waxaa jirta sabab qoyskiisa ah oo ku qasbaysa.
Waxa uu Bruno Fernandes shaaciyay in dabaal degiisa ay ka danbayso inantiisa/gabadhiisa yar balse marka uu sameeyo ayna kamarada Sky Sports qaban oo uu dacwad kala kulmo inantiisa marka uu guriga yimaado.
Sheekadan ayaa soo bilaabantay xili ciyaareedkii labaad ee uu Bruno Fernandes joogay kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon wuxuuna soo bandhigay qaabkii ay ku bilaabtay.
Ugu horayn Bruno Fernandes oo sharaxaya sababta ka danbaysa dabaal degiisa ayaa yidhi: “Tani waa sheeko dheer. Markii aan Portugal ka ciayarayay waxaan bilawday xili ciyaareedkaygii labaad ee Sporting, waxaana soo koraysay inantayda yar”.
“Mararka qaar aniga iyo xaaskayga ayaa la hadlaynay iyada, waxayna bilawday in ay sidaas samayso (Farihiisa ayuu dhegaha saaray). Kadib markii ay sidaas samaysay, waxaan kan u qaatay u dabaal dega goolasha oo iyada ugu dabaal dego”. ayuu Fernandes hadalkiisa raaciyay.
Laakiin Bruno Fernandes ayaa ku dooday in kamarada Sky Sports ayna marka uu dabaal degan samaynayo qaban oo uu Sky Sports la hadli doono wuxuuna yidhi: “Waxaan u baahanahay in aan la hadlo Sky Sports, sababtoo ah markasta oo aan kan sameeyo marnaba ma soo baxdo, sidaa daraadeed waqtiga oo dhan marka aan la hadlo iyada(inantiisa) ee ciyaaraha kadib waxay ii sheegtaa- Maad samayn taas!”.
“Waxaan u baahdaa in aan mararka qaar sawiro u diro, eeg waan sameeyee” qosol ayuuna raaciyay: “Waad aragtaa ma aha?”. ayuu Fernandes ku sii sharaxay dhibaatadaa kamrada Sky Sports ku hayso.
Fernandes ayaa hadalkiisa raaciyay: “Hadda waxay ogtahay in aan markastaba iyaga u sameeyo, bilawgii iyagu may garanayn, laakiin hadda way garanaysaa, markastaba iyada ayaa iska leh”.
“Hadda xaaskaygu waa xaamilo (ilmo ayay sidaa) isla markaana waqti kasta oo ay carruurtaydu i waydiiyaan in aan hadda u baahanahay in aan laba gool dhaliyo, kulankii Brighton laba gool ayaan hdaliyay waxayna ii sheegtay :’ Laba kaliya ayaad dhalisay, laakiin hadda waxaad u baahan tahay in aad saddex dhaliso, mid aniga ah, mid ilmaha yar ah iyo mid kale kale oo hooyada ah”.
Bruno Fernandes ayaa gabi ahaanba badalay xaaladii uu Man United ugu yimid isaga oo 8 gool soo dhaliyay wuxuuna ka caawiyay in ay Champions league ku soo laabtay Red Devils.
xaqiiqdii buruno was yalyay mudan in looheeso waayo waaqicii kooxda ayuu badalay
Sax waaaye taaas ayan ben ahayn wlhi wuu bedelay koooxda ninkaan